Root ary apetraho ny fanarenana amin'ny Xperia T | Androidsis
Victor morales | | Fanarenana Android, Android Root, Rom, Sony, Android Version
Androany izahay mitondra anao avy amin'ny Androidsis, ny lalana mankany faka ary apetraka a famerenana amin'ny Sony Xperia T miaraka Jelly bean. Aorian'ity fampianarana ity dia afaka mahita ny fomba fandefasana flash isika, zavatra izay tsy maintsy hataontsika mba hongotantsika ny telefaona finday.
Andao aloha handeha amin'ny zava-dehibe, Inona no atao hoe miorim-paka finday? Ny rafitra Android mazàna nohidiana amin'ny fomba izay tsy ahafahantsika mikasika ny 'fakany'. Ny fakany dia manome antsika fidirana amin'ireo faka ireo mba hahafahantsika manova ny rafitra fiasa araka izay tadiavintsika (Miaraka amin'ny fikarakarana MAFY hatrany). Amin'ny ankapobeny dia toy ny hoe tonga tao aminay ny Microsoft Windows niaraka tamin'ny lahatahiry 'C: Windows' ka tsy afaka mikasika azy isika ary miditra ao aminy.
Avy eo dia hazavaiko ny dingana manaraka hanarahana amin'ny faka sy hametrahana ny sitrana amin'ny Xperia T:
File ho an'ny Root
File ho an'ny fanarenana
Amboary ny fanarenana
Mamaky firmware izahay .303
Rehefa vita ny fizotran'ny flashing dia esorinay ny solosaina amin'ny solosaina ary averinay indray.
Izahay dia mamoaka ilay rakitra nosafidinay niaraka tamin'ny programa 7zip ary manatanteraka azy.
Ny finday dia hampiseho aminay ny safidy hamerenana backup, hanaiky izahay ary hamela anao hamerina azy io.
Avelantsika hamerina azy io ny finday, ary ho hitantsika fa manana ilay rindranasa izahay SuperSu nametraka.
Hanohy hametraka ny fanarenana izahay izao
Mampifandray ny finday amin'ny alàlan'ny Mode Debugging USB izahay (Tena zava-dehibe izany).
Izahay dia manatanteraka ny fisie, miaraka amin'ny finday efa mifandray.
Avelantsika hamita ny fizotrany ilay programa.
Vantany vao vita ny fizotrany dia hamerina ny finday indray izahay.
Izao dia manana ny finday miorim-paka ary napetraka ny fanarenana. Mila mametraka Jelly Bean fotsiny isika.
Misintona ny rakitra roa LT30p_9.1.A.0.489_root_deodexed izahay ary mamoaka azy ireo, ary ny fanamboarana ho an'ny fanarenana
Hametraka azy ireo ao amin'ny fahatsiarovana anatiny ny finday isika.
Raha te hiditra amin'ny fanarenana dia hamerina hanangana ny telefaona finday izahay ary rehefa hivadika ny jiro LED volomparasy dia tsy maintsy apetaho ny bokotra fanamafisam-peo ary hanomboka amin'ny fomba fanarenana ilay fitaovana.
Hanao famafana telo isika, hamafa ny angon-drakitra / famerenana amin'ny laoniny ny fonosana, hamafana ny cache, ary handeha handroso isika ary hamafa cache cache dalvik.
Ankehitriny dia hiditra ny fametrahana zip avy amin'ny scard isika ary hitady ny fampirimana izay nampahafantarinay ny rakitra LT30p_9.1.A.0.489_root_deodexed ary kitiho ary apetraho izany.
Rehefa vita ny fizotrany dia hanao dingana mitovy ihany isika fa amin'ity indray mitoraka ity dia apetraka ny fanarenana ho an'ny fanarenana.
Vantany vao vita izany dia hanana ny Xperia T miaraka amin'i Jelly Bean miorim-paka isika ary miaraka amin'ny famerenana amin'ny laoniny.
Raha te hianatra bebe kokoa momba ny voambolana Android ianao dia mijanona kely eto aminay malagasy.
Fanazavana fanampiny - Alefaso ny Xperia T anao, Rakibolana Android
Fampidinana - Flashtools, LT30p_9.1.A.0.489_root_deodexed fisie, Firmware .303, File ho an'ny Root, File ho an'ny fanarenana, Amboary ny fanarenana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Xperia T, Root ary fanarenana miaraka amin'ny Jelly Bean
Misaotra betsaka anao amin'ny lesona. Ny xperia T dia niorim-paka tamin'ny fomba nahagaga. Ny zavatra ratsy dia ny famafana ny rindranasa avy amin'ny fampirimana System dia miverina indray ny telefaona, ary indraindray rehefa manomboka indray ny fampiharana voafafa dia miseho indray. Vitako io hehe. Misaotra betsaka, tsara fanahy!
Mamaly an'i jack
SenseiMX dia hoy izy:
Miarahaba anao, fanontaniana iray:
Rehefa vita ny fizotrany dia hanao dingana mitovy ihany isika, fa amin'ity indray mitoraka ity dia apetraka ny fanarenana ho an'ny fanarenana. - Rehefa manao an'io dia mila manasa namafa ve?
Valio amin'i SenseiMX
Tsy ilaina izany fa apetaho mivantana ny fanamboarana
Misaotra betsaka! TUTORIAL MAFANA!
Napetraka sy notsapaina 100%
Tsy azoko. Izahay mampirehitra ny firmware .303. Apetrako ao amin'ny folder C: Flashtoolfirmwares ny fisie LT30p_7.0.A.1.303_CH.ftf ary atombohy tsy misy olana ny olana.
Amin'ny fotoana iray dia mangataka ahy hamoaka ny telefaona izy, mamono azy ary manindry bokotra izay tsy mila atomboko azy.
Izay azoko atao
aorian'ny famonoana azy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra volume down dia milaza amiko izy fa tsy manana mpamily aho, mijery ao amin'ny folder ...
ampifandraiso aloha amin'ny telefaona ny telefaona hametrahana ny mpamily, raha tsy izany ampidiro ny folder C: / Flashtool / Drivers ary apetraho avy eo
Misaotra an'i Victor tamin'ny valiny haingana.
Momba ny fametrahana ary ho an'ny manaraka tsy misy traikefa be izay te-hanao izany dia avelao aho hanao fanamarihana vitsivitsy, mifototra amin'ny lesoko.
-Mba hamelatra ny telefaona, voalohany, araho ny fampianarana tena tsara nataon'i Victor Morales tenany, izay azo idirana avy amin'ity pejy ity. Raha mangataka mpamily anao izy ireo dia ao anaty iray amin'ireo lahatahiry ao anatin'ny programa Flashtools azonao jerena ao amin'ny C: kapila mafy. Ny safidy roa farany sy ny xperia tx no napetrako.
-Mba hanatevin-daharana ireo fizarana roa amin'ny LT30p_9.1.A.0.489_root_deodexed_UB miaraka amin'ilay programa 7z dia napetrako tao anaty fampirimana iray ihany ary taorian'ny fisafidianana ireo roa ireo dia nahazo rakitra megabytes 500-hafahafa aho. Napetrako izany satria ny ampahany faharoa dia tsy eken'ny programa.
-Ny dingana faha-13, ampiasainay ny 7z hanatevin-daharana ireo fizarana roa araka ny efa noresahiko tetsy ambony fa ny rakitra CWM_REBOOTFIX_T AZA esory izany na ho tafajanona ianao nefa tsy afaka mametraka azy avy amin'ny fanarenana ary tsy hanana fanovana namboarina ny findainao rehefa mametraka 4.1.2 ianao. Natomboko indray ny fizotrany manontolo hanitsiana ity lesoka ity.
Izany ihany, antenaiko fa ny zavatra niainako dia hanampy olona hahita azy mora kokoa.
Victor, Misaotra an'ity lesona ity.
Misaotra nizara ny zavatra niainanao. Vaovao aho. Tena nanampy ahy….
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny fanarenana raha vantany vao vita ny dingana rehetra ary tonga amin'ny 4.1.2? ny feo mandeha rehefa manomboka dia tsy mety amiko.
Miasa tsara ny mpampiasa Super
Andramo tsindrio matetika ny fanalahidy midina
Tsy mandeha izy io, misy fomba fametrahana ny CWM_REBOOTFIX_T ve nefa tsy mila manao ny dingana rehetra indray?
Ny iray amin'ireo fomba roa dia tokony handeha aminao.
Azonao antoka ve fa napetraka tsara?
Raikitra, forum.xda-developer dia manana rakitra izay mihodina avy amin'ny solosaina miaraka amin'ny telefaona mifandray amin'ny usb debugging, JB's.
Mba hidirana amin'ny fanarenana rehefa manomboka ny telefaona dia tsindrio matetika ny volanao
hoy dia hoy izy:
Inona ny rakitra lazainao? Toy izany koa no mitranga amiko, heveriko fa tsy nandrehitra tsara ny CWM aho?
Valiny tamin'i Said
Tsikaritro fa ny fandrakofana 3g dia somary ratsy kokoa taorian'ny fanovana. Rehefa very ny fandrakofanao dia mivoaka koa ny telozoro fampitandremana somary manelingelina.
Misy hevitra ny fanamboarana azy?
Mijaly amin'izany ihany aho, omaly vao nahavita ny tutorial, ary satria nifandray tamin'i WIfi aho dia tsy tsapako izany, fa androany nandao ahy tontolo andro aho tsy nisy 3G, dia tsy nahazo signal. 🙁
Victor Morales dia nametraka lahatsoratra vaovao miaraka amin'ny ROM izay miasa tsara ary tsy manana olana amin'ny 3G. Manentana anao aho hametraka azy
Salama, voalohany indrindra, tuto tsara, niasa lavorary ho ahy izy io, manana olana lehibe sy lehibe fotsiny aho, very ny fifandraisana amin'ny finday 3g ny findaiko, fantatrao ve raha zavatra mahazatra izany?, Miaraka amin'ny vahaolana?, Tiako ny valinteninao. ary misaotra betsaka tamin'ny fampianarana 🙂
Ampandehano ny roaming data raha izany no olana
Brondo007 dia hoy izy:
Nitranga tamiko izany vao tsy ela akory izay, ary namaha azy aho tamin'ny fametrahana ireo rakitra APN indray ... karohy ao amin'ny google ... lazaiko raha izany no izy ... tsy maintsy hamaha ny olanao ianao .. arahaba
Valiny amin'i Brondo007
Mety ho an'ny xperia t avy any mexico ve izany?
Eny, mandaitra ho an'ny rehetra izany
Salama, tutorial tena tsara, toa mandeha tsara ny zava-drehetra aorian'ny fizotrany, manana fisalasalana kely fotsiny aho, inona ny fanarenana ary inona no ilana azy? Vaovao aho amin'izany, mankasitraka valiny aho, misaotra.
dia ny hahafahanao miditra ny sitrana raha vao apetraka ny kinova 4.1.2. Tsy nety tamiko izany fa raha ny fanazavako etsy ambany dia azo vahana amin'ny fisintomana rakitra XDA, "CWM4XperiaT_v4i_JB"
Ok, misaotra tamin'ny fanazavana
Tsara raha toa ka rehefa manisy totoloire ianao dia manondro izay niavian'ireo tany am-boalohany, amin'ity tranga ity avy amin'ireo mpamorona XDA, satria asehon'izy ireo mazava tsara hoe azafady ny fiaviany na manaova rohy mankany amin'ny hafatry ny forum ao amin'ny XDA.
Ny fatiantoka izay nanana olana tamin'ny 3g satria namaha izy ireo ary miasa amin'ny baseband ny enx mexico
Olles apetrakao ny flashing 303. Ary mandefa rohy fampidinana ianao fa nametraka ny firmware303 tamin'ny gilasy aho ary miorim-paka ((saingy te-hametraka ny fanarenana aho ary tsy mahazo afa-tsy ny «écran» mainty «misy tsipika 2 na 3 ary avy eo milaza izany izaho manindry ny lakile rehetra)) ary tsy afaka miditra amin'ny maody fanarenana (novonoiko io, averiko indray izy manao ny volume fa tsy misy na inona na inona) manampy! Mba miangavy re
Valiny tamin'i Michel
Raha ataonao araka ny voalazany dia tsy maintsy miasa ho anao izy
Alejandro Diaz dia hoy izy:
Salama maraina, misaotra ny asanao, manana fanontaniana aho, nividy Xpera T aho ary tonga amin'ny teny sinoa, ho an'ny safidy fiteny, ovay ho Espaniôla, fa ny fampiharana rehetra dia amin'ny teny sinoa, rehefa manandrana mametraka rindrambaiko amin'ny alàlan'ny fampiharana antsoina hoe "PlayNow" dia mivoaka amin'ny fiteny sinoa ny zava-drehetra, aorian'ny fanerena betsaka dia apetrako izy ireo (Gmail, Google Play) ankoatry ny hafa ary tsy manokatra azy ireo, ampifandraisiko amin'ny pc sy compation malefaka havaoziko amin'ny android 4.1. .., ny fanontaniana dia inona no tokony hataoko Mba hananako Espaniôla 100%, ary ny fampiharana izay mahazatra ho ahy dia miasa, Ao amin'ny faritra GPS, ampandehano ny safidy hikaroka malefaka ao amin'ny faritra misy ahy, ary ny zavatra rehetra dia mitohy miseho amin'ny teny sinoa. . Tsy afaka mampifangaro ny kaonty Gmail aho, heveriko fa ny rindrambaiko antsoina hoe "remrem" no mitantana ny kaonty, ary satria tsy manana fifandraisana aho, tsy manana mailaka, tsy manana naoty, tsy manana manana kalandrie, nanandrana nametraka Opera aho, ary raha tsy izany dia napetraka tamin'ny teny sinoa izy, ny zavatra tokana ananako amin'ny teny espaniola dia ilay fitendry manana «ñ». Vonjeo, omeko anao ny marotoa, Misaotra anao. Fanamarihana: Asa tena tsara sy ny rohy LT30p_9.1.A.0.489_root_deodexed, tsy mandeha io.
Valiny tamin'i Alejandro Diaz
Zavatra iray, ity tutorial ity dia ho an'ny Android 4.1.2 Jelly Bean ofisialy ??
Salama daholo, nanao an'ity dingana ity aho herinandro vitsivitsy lasa izay ary nandeha tsara daholo ny zava-drehetra fa taorian'ny fanavaozana ilay rindrambaiko vaovao 9.1.A.1.1.4.0 miaraka amin'ny pc compinion dia tsy mitovy intsony ary tsy eo intsony. Izaho dia faka, tsy mandeha ny fizarazarana, misy zavatra azoko atao ve tsy mila manao ny dingana rehetra? Misaotra mialoha ...
Jason monti dia hoy izy:
Salama misaotra ny tuto .. Heveriko fa mazava fa raha manavao azy amin'ny kinova 9.1.A.1.140 very root aho, rehefa vita ve ny fizotry ny fakany dia miala amin'ny fanavaozana vaovao aho ary tsy haiko raha hanaiky azy? fanampiana sasany? Misaotra anao
Valiny tamin'i Jason Monti
Ab Castillo dia hoy izy:
Fitsapana 😀 misaotra!
Valiny tamin'i Ab Castillo
Eduardo Bastidas Lasso dia hoy izy:
Ny fomba fanarenana dia tsy mandeha amin'ny fakany xperia T fotsiny raha miseho ny superus fa tsy afaka miditra amin'ny maody fanarenana aho ... misy olona manana vahaolana
Valiny tamin'i Eduardo Bastidas Lasso
juanpy dia hoy izy:
Tsy maninona fa tsy manana kaody simlock aho ????
Satria efa namaky aho fa mila mamoaka ny findaiko voalohany amin'ilay orinasa miaraka amiko (telcel Mexico)
Mamaly an'i juanpy
Misy olona manampy ahy ???? Averiko ihany, tsy manana ny nomeraoniko simlock na ny bootloader voahidy aho, tsy maninona intsony izany ???
Entanina aho hanomboka ny fomba fiasa fa ireo fisalasalana ireo dia manakana ahy = (
Fulton dia hoy izy:
Salama aho manana olana amin'ny sony xperia T Nosakanako ny tambajotra counter (x) 0
Inona no azoko atao? Misaotra?
Mamaly an'i fulton
katoogun dia hoy izy:
Salama, ahoana no mety hanampian'ny olona ahy, tsy haiko ny manafoana ny rakitra 2 na ny fomba hanaovana azy mba hampiasaina sy zavatra hafa, olona manampy ahy amin'ny fametrahana rom hafa ao aminy, tsy mandray intsony izy io ny fambara telcel, ahoana no azoko azafady misaotra anao, nanandrana tamin'ny lafiny maro aho ary tsy afaka nanery azy haka fambara aho, misaotra betsaka anao aho handao ny mailako sao misy manampy ahy Andriamanitra hitahy anao
Mamaly an'i katoogun
nayroby azuaje dia hoy izy:
Misaotra anao, misaotra betsaka, tsy afaka nametraka ny cwm tamin'ny fomba mahazatra aho, nanome ahy hadisoana foana izany, nanaraka ny dianao aho ary izao dia milamina ny zava-drehetra amin'ny cel azoko apetraka ny cwm ary ho haiko ny manavao azy lolipop
Mamaly an'i nayroby azuaje
Luis Mateo Apuguango dia hoy izy:
Victor, azonao atao ve ny manampy ahy hatramin'ny voalohany? Ahoana ny fomba handefasako izany firmware izany? Tsy azoko na inona na inona.
Valiny tamin'i Luis Mateo Apuguango